Sida loo isticmaalo Alaarmiga, saacadda saacadda saacadda iyo saacadda digniinta ee Windows 10 | War gadget
Khamri Dila | | Software
Windows 10 waa nidaamka cusub ee ay ku shaqeyso Microsoft oo ay u adeegsadaan dad aad u tiro badan (annaga oo aan ku jirno) tijaabi mid kasta oo ka mid ah astaamaha cusub. Si tartiib tartiib ah, tiro aad u tiro badan oo qalab ah ayaa la ogaaday taas waxay soo jiiteen indhaha bulshada oo dhan oo ay ka dhex muuqdaan, qaylo-dhaanteeda iyo qalabkeeda saacadda alaarmiga.
Dhowr maalmood ka hor, warka ku saabsan cusub oo weyn - cusbooneysiinta ay bixiso Microsoft ee Windows 10, wax ay tahay inaad iska hubiso haddii aad isticmaaleyso noocyadeeda farsamo. Qormadan waxaan ku xusi doonnaa sida loola shaqeeyo aaladdan ay Microsoft soo jeedisay iyo waliba waxaad ka heli kartaa Windows 8, inkasta oo aadan ku heli doonin noocyadii hore.
1 Qalabka digniinta ee Windows 10
2 Waxqabadka saacadaha ee Windows 10
3 Waxqabadka saacadda-saacadda ee Windows 10
Qalabka digniinta ee Windows 10
Qalabka cusub ee imanaya ayaa lagu rakibay Windows 10 badanaa waxay ka fikireysaa seddex hawlood, ahaanshaha iyaga ugu horreeya kan aan soo qaadan doonno xilligan, taas oo ah, digniinta. Si loo helo, waxaan kugula talineynaa:
Gal Windows 10.
Inaad gujiso batoonka bilowga (bidix hoose)
Ku qor meesha raadinta ereyga «alaarmiga«
Tallaabooyinkan yaryar aaladda markiiba waxay ka muuqan doontaa natiijooyinka; kaliya waa inaan doorano si aan ugu raaxeysanno shaashadda buuxda; qalabkan waxaa iska leh qeybta «codsiyada casriga ah» maxaa loo sameeyaa, waxaad ku arki laheyd muuqaal muuqaal ah oo ka fikiraya «Isdhaxgalka Isticmaalaha Cusub»; Markii aad maamusho, waxaad heli doontaa shaashad aad ugu eg kuwa soo socda.
Qabashada la sheegay waxaad awoodi doontaa inaad ogaato jiritaanka saddexda shaqo ee aan soo xusnay bilowgii, kuwani waa digniinta, saacada iyo saacada saacadaha. Dhinaca midig waxaa ku yaal astaan ​​yar oo leh calaamadda «+», oo aad dooran karto haddii aad rabto inaad ku darto qaylo-dhaan dheeraad ah. Kaliya adoo taabanaya lambarka (oo matalaya waqtiga) ee ku yaal qaybta dhexe ee wareegga, is-beddelka ayaa is beddelaya. Si loo sameeyo baaritaanka, waxaad gelin kartaa a digniinta at toban si aad u hubiso inaad ku dari karto inta alaarmiga ah ee aad rabto.
Runtii waa wax cajiib ah, halka kaliya ee lagaa rabo inaad qeexdo waqtiga adoo dhaqaajinaya wareegga yar ee xagasha ee gudaha ku jira; wareegga wareejinta ee wareega wareegga beddelkiisa wuxuu metelaa daqiiqadaha. Waxaad sidoo kale qeexi kartaa sida digniinta loo shidaayo, taasi waa, hadaad rabto garaac maalin kasta ama qaar uun ka mid ah; hal dhinac "gambaleellada" ayaa jooga, waxaa jira tiro badan oo iyaga ka mid ah oo aad ka kala dooran karto, hadba midka aad ugu jeceshahay. Kaliya taabo (ama dhagsii) astaamaha ciyaarta yar ee ku ag yaal mid kasta oo ka mid ah barnaamijyadan si aad u maqashid dhawaqooda.
Marka aad qeexdo cabirka alaarmiga, waa inaad kaliya dib ugu noqotaa shaashadii hore ka dibna aad doorataa astaanta gambaleelka ee dhaha "waa la gooyay" si loogu beddelo qaabka "on".
Waxqabadka saacadaha ee Windows 10
Tani waa shaqada kale ee ku dhex jirta nidaamkan hawlgalka; waxaa jira qoraal oranaya «tirin«, Sababtoo ah waa waxa qalabkani dhab ahaantii gaari doono.
Sidii hore oo kale, wareega gudaha ayaa kaa caawin doona inaad qeexdo daqiiqadaha iyo wareegga kore ilbiriqsiyada. Waad ku dari kartaa inta alaarmiga aad rabto calaamada "+". Si aad u bilawdo saacada, kaliya taabo (ama dhagsii) astaanta bartamaha wareegga, taas oo u eg "ciyaar".
Waxqabadka saacadda-saacadda ee Windows 10
Shaki la'aan, tani waa shaqada ugu fudud ee la fulin karo, maadaama aan kaliya nahay riix badhanka bartamaha wareegga iyo inay leedahay astaan ​​aad ugu eg tan «taranka».
Ficil ahaan ma jiraan wax kale oo lagu sameeyo shaqadan, waana la arki karaa in waqtiga uu bilaabmayo inuu shaqeeyo markii la yiri batoonka la riixay.
Sidaad u bogi karto, muuqaalka cusub ee lagu dhisay Windows 10 ilaa isticmaal alaarmigaaga, saacad ama saacadaha saacadaha shaqada waxay siisaa fursado aad u weyn kuwa doonaya inay u adeegsadaan agabkan halkii ay uga isticmaali lahaayeen taleefannadooda gacanta.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Software » Sida loo isticmaalo digniinta iyo soo-kicinta ee Windows 10
Alaarmiga ma aha wax ku cusub Windows 10, horey ayaa loogu sii rakibay Windows 8.
Salaan XtremWize ... Waxaan u maleynayay haddii aan ku xusay maqaalka. Xaqiiqdii waad saxantahay, saacadu way jirtay ilaa Windows 8 waana sababtaas tan kale ayaa loo samayn doonaa boosteejo kale oo lagu xusi doono Windows 7. Mahadsanid sharaxaadda, waa mid aad u ansax ah maadaama inbadan aysan aqoon macluumaadkaas.
Jawaab Rodrigo Iván Pacheco
Felipe D. (@AbdihakimAinte) dijo
Miyuu la shaqeeyaa kombuyuutarka dansan?
Jawaab Felipe D. (@PipeFG)
Ma shaqeyn doono marka kumbuyuutarku hawlgalo ama dansan yahay.
Qalabka digniinta ayaa ka dhawaajinaya marka arjiga la xidho, dhawaaqa wuu aamusanyahay, kombuyutarkaaga ayaa xidhan ama xaalad hurdo.
Sababtoo ah alaarmiga ma shaqeynayo marka saacadda alaarmiga la xiro, sida qosolka leh ee aan uga tagayo qalabka, taas waxaan u iibsanayaa saacad qaylodhaan dhaqameed Mahadsanid
Ku jawaab Giusseppe
Waxaan tan weydiinayay in muddo ah ... qaylo-dhaankeygu weligood ma baxayo kahor haddii ay sameeyeen, laakiin waxay u muuqataa in hadda ka dib, uusan jirin cid ka socota Windows oo i soo jawaabtay, halkan ayaan rajeynayaa Salaan.
Waan ku raacsanahay, Giusseppe macno badan ma helayo haddii kumbuyuutarka uusan daarin. Hawlgalkani wuxuu ahaa telefishanka muddo sannado ah. Waad ku mahadsantahay qoraalka waxaan rabay inaan arko sida ay u shaqeyso.
Carlos Maldonado dijo
Waxaan rabaa inaan ogaado sida aan u hagaajin karo saacadda caadiga ah ee shaashadda, sida aaladda, Window 10
Jawaab Carlos Maldonado
MA AQOON SIDII LOO FULIN LAHAYN XARUNTA .... Mahadsanid
Ku jawaab VOVIS
Daniel Alejandro DEVESA ARTEAGA dijo
WAAN ISKU DAYI DOONAA KADIBNA WUXU SOO KOOBAN.
Jawaab DANIEL ALEJANDRO DEVESA ARTEAGA
Aura waa kumbuyuutarka cusub ee loo yaqaan 'Newskill' ee loo yaqaan 'gamers'